Indlela Umshini wokuSwina owachaphazela ngayo iTemptile Revolution
Umshini wokuSula kunye neNkcazo yokuTytile
U-Elias Howe wasungula umatshini wokuthunga ngo-1846
Ngaphambi kokusungulwa komatshini wokuthunga, ukuthungwa kakhulu kwenziwa ngabantu ngabanye emakhaya abo, nangona kunjalo, abaninzi abantu banikezela iinkonzo njengabaxhasi okanye izithambiso ezincinci kwiintengiso ezincinci apho umvuzo wawuphantsi kakhulu.
U-Thomas Hood's ballad INgoma yesiKhwama, eyapapashwa ngo-1843, ibonisa ubunzima besiNgesi se-seamstress: Iminwe idiniwe kwaye igugile, Ngamaqebunga enzima kwaye ebomvu
E-Cambridge, eMassachusetts, umqambi omnye wayebenzima ukubeka ingcibi ingcamango yokunciphisa ukubaluleka kwalabo abahlala ngedaliti.
U-Elias Howe wazalelwa eMassachusett ngowe-1819. Uyise wayengumlimi ongenaphumelela, owayenamacilisi amancinci, kodwa ubonakala engaphumelelanga nto. I-Howe yayikhokelela ngobomi benkwenkwezi yaseNew England, iya esikolweni ebusika kwaye isebenza malunga nefama kuze kube yiminyaka elishumi elinesibhozo, isebenzise izixhobo imihla ngemihla.
Ukuvalelwa kwemvuzo ophezulu kunye nomsebenzi onomdla eLowell, okhulayo edolophini eMlambo iMerrimac, waya khona ngo-1835 waza wafumana umsebenzi; kodwa kwiminyaka emibini kamva, washiya uLowwell waza waya kusebenza kwisitolo somatshini eCambridge.
U-Elias Howe wabuyela eBoston, waza wasebenza kwintengiso yomatshini we-Ari Davis, umenzi onobumba kunye nomlungisi womatshini ococekileyo. Yilapho u-Elias Howe, njengomatshini omncinane oqala ukuva ngemishini yokuthunga waza waqala ukuphazamisa ngale ngxaki.
Iimveliso zokuQala zokuQala
Ngaphambi kwexesha likaElias Howe, abaninzi abaqulunqi bezame ukwenza imishini yokuthunga kwaye abanye bebengaphumeleli. UTomas Saint, ongumNgesi, unelungelo lobunikazi kwiminyaka engamashumi amahlanu ngaphambili; kwaye malunga naloo xeshanye umFrentshi ogama linguThimmoner wayesebenza umatshini wokuthunga amashumi asibhozo owenza imifuno yomkhosi, xa abathengisi baseParis, besaba ukuba isonka sasiza kuthathwa kubo, saqhekeza kwindawo yakhe yokusebenzela waza wabatshabalalisa oomatshini.
UThimmonier wazama kwakhona, kodwa umatshini wakhe akazange asebenzise jikelele.
Iipatenti ezinamalungelo abenziweyo zanikezelwa ngamashishini okuthunga eMelika, kodwa kungekho miphumo ebonakalayo. Umqambi ogama lakhe linguWalter Hunt wayefumene umgaqo wokutshixa kwaye wayakhe umatshini kodwa walahlekelwa umdla kwaye washiya indlela yakhe, njengokuba yimpumelelo. U-Elias Howe u-probaly wayengazi nto nayiphi na yabalandeli. Akukho ubungqina bokuba wayeke wabona umsebenzi womnye.
U-Elias Howe Uqala Ukuqalisa
Ingcamango yomshini wokuthunga umculi u-Elias Howe. Nangona kunjalo, uHowe wayetshatile kwaye wayenabantwana, kwaye umvuzo wakhe wawungama-dollar ayisithoba kuphela ngeveki. UHowe ufumene inkxaso evela kumfundi osekufundela esikolweni, uGeorge Fisher, wavuma ukuxhasa intsapho kaHowe aze amnike ngeedola ezingamakhulu amahlanu ngempahla kunye nezixhobo. I-attic kwindlu kaFisher eCambridge yaguqulwa yaba yindawo yokusebenzela yaseHowe.
Imizamo yokuqala yeHowe yayingaphumeleli, de kube yinto eya kuye. Ngaphambili, yonke imishini yokuthunga (ngaphandle kukaWilliam Hunt yayisetyenzisile i-chainstitch, eyachithwa ngentambo kwaye idibaniswa kalula.
I-chainstitch yintambo yokukhangela okanye ukukhangela, ngelixa i-lockstitch i-stitch. U-Elias Howe wayesebenza ebusuku kwaye wayesendleleni eya ekhaya, ecinezelekile kwaye edangelekile, xa le ngcamango yavela engqondweni yakhe, mhlawumbi ephuma kumava akhe ekotini. I-shuttle yayiza kuqhutyelwa ngaphaya nangaphandle njengento yokugqithisa, njengoko yayibonile amawaka ngamaxesha, kwaye idlula ngaphaya komgca womtya apho inaliti ephihliweyo yayiza kuphosa ngaphesheya kwengubo; kwaye indwangu yayiza kufakwa kumatshini ngokubhekiselele kwiiphini. Ingalo eyengqengqelo yayiza kufaka inaliti ngesimangalo se-pick-ax. Isibambiso esixhomekeke kwi-fly-wheel siza kunika amandla.
U-Elias Howe wenza umatshini ongekho nto, wakhawuleza ngokukhawuleza ngaphezu kweetlanu zabasebenzi abasebenzisa inaliti. Kodwa ngokucacileyo, umatshini wakhe wawudala kakhulu, unokuthunga kuphela umthungo ochanekileyo, kwaye uphumelele ngokukhawuleza.
Abasebenzi beenaliti babechasene, njengoko bekunjalo, kubakho nawuphi na uhlobo loomatshini bokugcina abasebenzi obenokubangela imisebenzi yabo, kwaye kwakungekho umenzi wembatho ozimisele ukuthenga umshini omnye kwixabiso uHowe wacela, ama-dollar amathathu.
U-Elias Howe we-Patent 1846
U-Elias Howe umatshini wesibini wokuthunga usuphuculo lwakhe lokuqala. Kwakuyinkimbinkimbi kwaye yahamba ngokugqithiseleyo. UGeorge Fisher wathatha u-Elias Howe kunye nomzobo wakhe kwiofisi ye-patent eWashington, ukuhlawula zonke iindleko, kwaye i-patent yanikezelwa kumqashi ngo-Septemba 1846.
Umatshini wesibini ahlulekile ukufumana abathengi, uGeorge Fisher utyalomali malunga neeyure ezingamawaka eebhiliyoni ezazibonakala zihleli ngonaphakade, kwaye akakwazanga, okanye akayikutshala imali. U-Elias Howe ubuyele okwesikhashana kwifama kayise ukuze alinde amaxesha angcono.
Okwangoku, u-Elias Howe wathumela omnye wabazalwana bakhe eLondon ngomshini wokuthunga ukuze abone ukuba nayiphi i ntengiso ingafumaneka apho, kwaye ngexesha elifanelekileyo ingxelo ekhuthazayo yafika kumvelisi ongenalutho. U-corsetmaker ogama lakhe linguTomas wayekhokhe imali engamakhulu amabini anamashumi amahlanu ngamalungelo eNgesi kwaye wayethembise ukuhlawula ubukhosi obuziimitha ezilishumi kumashishini ngamnye athengiswayo. Ngaphezu koko, uTomas wamema umenzi weLondon ukuba akhe umatshini ngakumbi ukwenza i-corsets. U-Elias Howe waya eLondon waza kamva wathumela intsapho yakhe. Kodwa emva kokusebenza kweenyanga ezisibhozo kumvuzo omncinci, wayesebuhlungu kakhulu ngaphambili, kuba, nangona wayevelise umatshini ofunayo, waphikisana noTomas kunye nobudlelwane babo bephela.
Umhlobo, uCharles Inglis, waphumelela u-Elias Howe imali encinci ngelixa wayesebenza kwenye imodeli. Oku kwenza u-Elias Howe ukuba athumele ikhaya lakhe eMelika, ngoko ke, ngokuthengisa umzekelo wakhe wokugqibela nokugubha amalungelo akhe amalungelo olungelo lobunikazi , wakhulisa imali eyaneleyo ukuba athathe inqanawa yakhe kwi-steerage ngo-1848, ephelezelwa ngu-Inglis, oza kuzama eUnited States.
U-Elias Howe wafika eNew York ngeentente ezimbalwa ephaketheni lakhe waza wafumana umsebenzi ngokukhawuleza. Kodwa umfazi wayefa ngenxa yobunzima obuye wahlupheka, ngenxa yobuthakathaka obukhulu. Ngomngcwabo wakhe, u-Elias Howe wayegqoke iimpahla ezibolekileyo, kuba isithuthi sakhe kuphela sasiyifake esitolo.
Emva kokuba umfazi wakhe efile, u-Elias Howe wenziwa ngokwakhe. Ezinye iimishini zokuthunga zenziwa kwaye zithengiswa kwaye ezo matshini zazisebenzisa imigaqo egunyazwe ngu-Elias Howe. Umntu woShishino, uGeorge Bliss, umntu onetyala, wayethengile umdla kaGeorge Fisher waza waqhubeka etshutshisa abaphulaphuli abanelungelo lobunikazi .
Ngaloo ndlela u-Elias Howe waqhubeka ekwenza imishini, wavelisa i-18 eNew York ngee-1850 kwaye akazange alahlekelwe ithuba lokubonisa ukufaneleka kwezinto eziye zapapashwa kwaye zaziswa ngento yabanye abaphulaphuli, ngokukodwa ngu-Isaac Singer , indoda engcono kakhulu yezoshishino kubo bonke.
UIsake Singer wajoyina uWalter Hunt . Umqashi wayezama ukugunyazisa umatshini ayewushiye malunga nama-20 engaphambili ngaphambili.
Iziboti zadlulela kwada kwada ngo-1854, xa ityala lilungiswe ngokufanelekileyo kwi-Elias Howe.
Ilungelo lakhe lobunikazi livakalisiwe, kwaye bonke abenzi bemishini yokuthunga mabaye kumhlawula i-dollar engamashumi amabini anesithandathu ama-dollar kuwo wonke umatshini. Ngoko u-Elias Howe wavuswa ngolunye usuku kusasa ukuba azinandiphe inzuzo enkulu, ekuhambeni kwexesha yaphakama ngaphezu kwamawaka amane eedola ngeveki, waza wafa ngowe-1867 isityebi.
Ukuphuculwa koMatshini wokuSula
Nangona isiseko esisisiseko sephepha lika-Elias Howe saqatshelwa, umatshini wakhe wokuthunga wawungumqalo onzima. Ukuphucula kwalandelwa, emva kwesinye, de kube umshini wokuthunga wawungenakufana nokuqala kukaElias Howe.
UJohn Bachelder wazisa itafile eqhelekileyo ekubekeni kuyo umsebenzi. Ngethuba lokuvula etafileni, iipikisi ezincinci kwibhande elingapheli lijoliswe kwaye zinyusa umsebenzi wewadi ngokuqhubekayo.
U-Allan B. Wilson wenza icebo lokujikeleza eliphethe i-bobbin ukwenza umsebenzi we-shuttle, kunye ne-bar encane encinci ephakanyiswayo etafileni kufuphi netsalane, iqhubela phambili isithuba esincinane, esithwala idayeni nayo, ihla ngaphantsi kwendawo ephezulu yetafile, kwaye ubuyela ekuqalekeni kwayo, ukuphinda ngokuphindaphindiweyo olu chungechunge lweziphakamiso. Esi sixhobo esilula sazisa umnini wayo inzuzo.
U-Isaac Singer, ozimisele ukuba ngumntu obalaseleyo kwishishini, ilungelo lobunikazi ngo-1851 umatshini onamandla ngaphezu kwanoma yimuphi na kwaye kunye nemibandela enobuninzi, ngokukodwa umgca wecindezeli ophantsi owenziwe phantsi kwentwasahlobo; kunye no-Isaac Singer nguye owokuqala ukuthabatha isiteji, eshiya zombini izandla zomsebenzisi ukhululekile ukulawula umsebenzi. Umatshini wakhe wawulungile, kodwa, kunokuba ubuchule bawo obugqithiseleyo, ubuchule bakhe boshishino obumnandi obenza igama lomculi igama elisekhaya.
Ubumbano phakathi kwabakhi beMveliso yokuSewing
Ngama-1856 kwakukho abakhiqizi abaningana abasendle, besongela imfazwe komnye. Bonke abantu babehlawula u-Elias Howe, kuba ilungelo lakhe lobunikazi belisisiseko, kwaye bonke babenokuzibandakanya ukulwa naye, kodwa kwakukho ezinye izixhobo ezinokubaluleka ngokulinganayo, kwaye nangona ukuba amalungelo abenzi beHowe bebhengezwa ukuba akukho nto inokwenzeka ukuba abakhuphiswano bakhe babeza kuba balwa ngokukrakra phakathi kwabo. Ngokwecebo likaGeorge Gifford, ummeli waseNew York, abaqambi abakhokelayo kunye nabakhiqizi bavuma ukuhlaziya izixhobo zabo kunye nokusekwa kwemali yokuchithwa kwemvume yokusetyenziswa nganye.
Olu "nxu lumano" lwaqulunqwa nguElias Howe, Wheeler noWilson, Grover noB Baker, kunye no-Isaac Singer, kwaye balawula intsimi emva kowe-1877, xa ubuninzi beepesenti ezisemthethweni ziphela. Amalungu akhiqiza umatshini wokuthunga aze athengise eMelika naseYurophu.
U-Isaac Singer wazisa isicwangciso sokuthengiswa kwintengiso, ukuzisa umatshini ukuba afumane amahlwempu, kunye ne-arhente yomshini wokuthunga, ngomatshini okanye ezimbini kwiinqwelo zakhe, wahamba kuyo yonke idolophu encinane kunye nesithili selizwe, ebonisa nokuthengisa. Ngelo xesha ixabiso loomatshini lawa ngokukhawuleza, kwada kwabonakala ngathi isiqubulo sika-Isaac Singer, "Umatshini kuwo onke amakhaya!" Kwakulungele ukuba kuqinisekiswe, kwakungekho enye intuthuko yomshini wokuthunga.
I-10 yeZiko leeMoto eziPhambili eziPhezulu zenzeke
Imbali YaseMerika yaseMerika kunye nexesha labafazi
I-STCW - Imigangatho yoQeqesho, iSiqinisekiso kunye nokuLondoloza
Funda Zonke Ngezihlandlo ZesiXhosa
Uluhlu 'lwePhepha lokuPhakamisa luhambisana njani nobuGcisa?
I-Par-3 Course kwiGalofu
Malunga noSurya Bonaly